Ukubuyekezwa Kwezimoto zeFord Edge Titanium SUV - Imali
Ukufunwa Kwemoto Yomndeni Entsha: IFord Edge Titanium
Quest New Family Car
Ngemuva kweminyaka eyishumi yokuthenga ama-sedan asezingeni lokungena asetshenzisiwe (njengasetshenziswa ngempela), mina nomyeni wami sabona ukuthi izidingo zethu zokushayela sezishintshile ngokusemthethweni. Manje besinezingane ezimbili namazinga amasha okuphepha nendawo. Futhi ngokuya ephuzwini, besifuna okuthile okuvele kuzwakale ukuthi sikhulile ngokwengeziwe. Yup, besisemakethe yeSUV midsize.
Ngakho-ke, lapho abantu bakwaFord bethembisa ukusiboleka i-2019 Edge Titanium , besingenile. Ngemuva kwesonto sishayela eyokuyeka isikole neyokuqhuba igilosa, esiminyaminyeni sezimoto ngisho nasohambweni lwamahora amabili lokuya endlini kagogo nomkhulu, nakhu ebesikucabanga.
OKUSHIWO: I-9 yama-SUV ahamba phambili ama-3-Row, kusuka ku-Luxury kuya ku-Affordable
Intengo: Ngama- $ 48,000 wenguqulo elayishwe ngokugcwele esiyihlolile, nakanjani lokhu kuyancintisana esigabeni sayo. Futhi yize (ngokudabukisayo) kuphuma ebangeni lethu lentengo, abanye abathengisi bazobe benikeza amadili njengoba amamodeli we-2020 asendleleni. Ngezansi: Kuzo zonke izici eziza neTitanium (kuqhathaniswa ne-SEL noma i-SE), lokhu kuzwakala njengokuchitha okufanele.
Ingaphakathi: Sawubona, izihlalo zesikhumba negumbi lomlenze elanele. Kuyavunywa, besichotshoziwe kwi-Sonata ka-2011 eminyakeni emibili edlule, kodwa lokhu kuzwakale njengethanga likanokusho. Besikwazi ukulinganisa kalula izihlalo ezimbili zezimoto ngemuva — sinesikhala somuntu omdala phakathi kwazo — futhi bekulula ngokumangazayo ukufaka izingane nokuphuma. Wonke umuntu (kepha ikakhulukazi ingane yethu eneminyaka emine) wayethanda i-panoramic sunroof / moonroof, futhi umyeni wami ongamamitha ayisithupha ubude wayithokozela le ndlu eyengeziwe. Noma kunjalo, cishe bekuyimoto engaphezu komndeni wethu onezidingo ezine, ikakhulukazi njengoba sihlala eBrooklyn futhi sipaka emgwaqweni.
Ukushayela: I-zippy ebushelelezi, ethule futhi emangazayo yemoto elingana nayo. Into eyodwa esiyibonile ukuthi ukusheshisa bekungcono uma ucisha imodi ye-eco, yona eyalimaza i-mileage yegesi.
Ubuchwepheshe bezokuphepha: Ukubhema okungcwele, sahlabeka umxhwele. Usizo lokupaka olunembile lwenze kwaba lula ukungena ezindaweni eziqinile zedolobha. Futhi ukulekelelwa komzila (ukukugcina ulayini wakho omkhulu futhi ebangeni elihambisanayo lokuhamba ngemoto phambi kwakho) bekuhambisana nokwelinye I-Tesla ngayihlola ngonyaka odlule . Siphinde sazizwa siphephe ngokwedlulele ngokwazi ukuthi kunama-airbags anomthelela ohlangothini nekhethini lombhede lokuphepha elingaphambili nelesibili, elisebenzisa ama-airbags uma kwenzeka kuqhuma intambo. Into eyodwa ebesingayithandi: Imoto ikukhalela njalo uma ithola imoto ibona isondele kakhulu, futhi sithole lezi zinzwa izinwele zisebenza ngokweqile.
OKUSHIWO: I-2019 Chevy Blazer RS ​​iyiSUV Yabantu Abazondayo Ama-SUV
Ezinye izinsimbi nezimpempe: I-Edge icace bha kucatshangelwa impilo yomndeni. Ngesikhathi sohambo oluya esitolo, siqaphele isango lokuphakamisa elenziwe ngonyawo, elikuvumela ukuthi uphakamise umlenze wakho ukuvula i-back hatch inqobo nje uma unokhiye kumuntu wakho (ikakhulukazi ulusizo lapho uthwele izikhwama) futhi izingwegwe zesiqu sangaphakathi sokulengisa lezo zikhwama, ukuze zingagudluki. Isistimu yokuqalisa eyihlane nayo ibipholile, yize kunzima ukuzibona sikusebenzisa kaningi lokho. Hawu! Futhi uhlelo lomsindo! Angijwayele ukuba umuntu onakekela kakhulu izinto ezinjalo, kodwa ingoma yethu engu-24/7 yeDisney izwakale kahle kakhulu e-Edge — futhi sikwazile ukuthi kube lula kangakanani ukuvulela ivolumu phezulu emuva nangaphambili ngaphambili.
Isinqumo sokugcina: IFord Edge Titanium iyimoto enhle, ikakhulukazi eyomndeni onezingane ezincane. Yize usayizi nentengo kungaphezu kwalokho esikudingayo, nakanjani sithengiswa kuhlobo lweFord. Eqinisweni, okulandelayo ohlwini lokuhlola: I-Ford Escape, ethi ibe ngosayizi omncane nenani lokuqala lama- $ 31,000, ingahle ibe yiyo yonke into esiyidingayo.
kanjani ukuqeda izinwele awe ngokwemvelo
ngaphambili kusike izinwele ezinde
I-katie holmes inenani elifanele
i-virgo man umdlalo omuhle womshado